Ndị na -ere ahịa China na -ere ahịa ahaziri onwe ha Label ntutu ntutu na ndị na -emepụta | Weiti
Ndị na -ere ahịa n'ahịa na -agbakwụnye mgbatị ntutu anya nkeonwe
1, Faux mink ndọtị nku anya
2, Ọkpụrụkpụ 0.03/0.05/0.06/0.07/0.10/0.12/0.15/0.18/0.20/0.25mm
4, ihe dị elu na nka siri ike
Usoro nlele dị.
Aha nkeonwe dị. Anyị na -anabata ọrụ OEM & ODM.
Ngwongwo dị elu na ọrụ aka kwụ ọtọ, ntutu anaghị akwụkwụ na enweghị ihe fọdụrụ, dị mfe iwepu, dị mfe iji, curl & ogologo. 24 awa mgbe ahịa gasịrị
Ọkpụrụkpụ 0.05m na 0.07mm bụ lashes olu a na -atụkarị aro, ị nwere ike tinye lashes otu ugboro 3 ~ 10 n'otu adịghị mma na -emerụ ahụ adịghị mma.
A na -ete ụdị ụdị ahịrị a naanị na ngwụcha 1/3 nke ndọtị, na -eme ahụ adịghị mma zuru oke ma dị egwu.
Ọ nwere ezigbo mgbanwe. ike ọdụdọ na iku ume. Ọ dị nfe ma dịkwa nro.
Ebe ọ bụ faux mink mere ya, ọ dị oke fechaa ma na -enye agba ojii dị ọcha. Daalụ maka enweghị ọkụ, ọ na -enye ọtụtụ ọdịdị eke.
Mgbatị ntutu anya na -agbakwụnye ogologo, ọkpụrụkpụ, curl na njupụta na lashes ndị sitere n'okike, na -akwalite mbuli na ọdịdị anya. A na -etinye ha n'otu n'otu na ntọala nke adịghị mma ọ bụla na gluu.
Akụkụ bụ isi: nku anya nke emebere tupu emee ka nku anya ya dị ngwa. Maka na ịkwesighi iji aka mee nku nku anya. Onye na -akwado curling a na -eji njikọ nrapado, enweghị eriri, ma nwee ntọala dị mkpụmkpụ ma dịkwa warara nke na -agaghị emebi nku anya.
Banyere ọkpụrụkpụ: Ụfọdụ ndị na -ese nku anya na -ekwu na 0.05mm na 0.07mm dị gịrịgịrị iji. Agbanyeghị, ha dị nro na eke. Ha anaghị ekwesi olu ike. Ụfọdụ ndị mmadụ na -ekwu na 0.10mm dị gịrịgịrị, ụfọdụ na -ekwukwa na 0.10mm buru oke ibu mana ọ siri ezigbo ike. N'ezie, ụdị nku anya ọ bụla nwere uru nke ya. Teknụzụ ntutu anya nwere ike họrọ nku anya dị ka mmasị ndị ahịa si dị. Enwekwara ike iji ndị na -akwado prefabricated ya na ndị egwu kpochapụwo iji mepụta nchịkọta ngwakọ.
Ebumnuche: zuru oke maka nku anya. Ndị na -ese nku anya na -ejikarị nku anya ụgha a, yana ụfọdụ ngwa maka ịgbatị nku anya, dị ka tweezers, gluu ọkwa ahụike, paịlị gel, ihe mkpuchi anya, osisi mascara, wdg. Tinye na nku anya 1 n'otu oge.
Ihe: nku anya a bụ nke PBT ojii, polybutylene terephthalate, nke na -adigide dị ka polyester, ma nwee ike iguzogide oke okpomọkụ na ihe mgbaze dị iche iche (ude ma ọ bụ nhicha). Ha dị nro ma dịkwa nfe, dị ka nku anya gị. Tụkwasị na nke a, ọ bụ ihe na -eme gburugburu ebe obibi.
Nke gara aga: Label nkeonwe Igwe Ọdụdọ Ụgha na Igwe Ọdụdọ
Osote: Hazie Label Nkeonwe Otu Mgbakwunye Anya ntutu ntutu
Itinye nku anya ụgha
Ndị na -ere mgbatị ntutu anya
mpe mpe mpe akwa
mgbatị ntutu anya nkeonwe
Hazie Label Nkeonwe Oge gboo Fa ...
mink lashes, Anya anya, Mgbatị ntutu anya, Ndị na -ere ntutu anya, egbugbere ọnụ, eyeliner,